Kullanka baarlamaanka oo lagu qaban doonno xarunta dugsiga tababarka ciidamada booliska – Bulshoweyn.com | Your Source Of News And Entertainment
Kullanka baarlamaanka oo lagu qaban doonno xarunta dugsiga tababarka ciidamada booliska
Waxaa maanta markii ugu horeeysay lagu wadaa in kullanka baarlamaanka federaalka Soomaaliya uu ka furmo xarunta dugsiga tababarka ciidamada booliska Soomaaliyeed ee Jeneraal Kaahiye oo ku taalla degmada X/jajab ee magaalada Muqdisho.
Saacadaha soo socdo ayaa la filayaa in madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya Mudane Maxamed C/laahi Farmaajo uu furo kullanka baarlamaanka 10-aad, kala-fadhigiisa labaad, sida uu qabo dastuurka dalka Soomaaliya.
Madaxweyne Farmaajo ayaa la filayaa inuu khudbad ka jeediyo kullankaasi, isagoona ka hadli doonno arrimo badan oo ay ka mid tahay murankii ka taagnaa heshiiskii maamulka Somaliland ay dekedda Berbera ugu fasaxeen shirkada DP World ee laga leeyahay dalka Imaaraadka Carabta.
Maamulka Somaliland ayaa heshiis la saxiixday shirkadda DP World, taas oo ay dekadda magaalada Berbera ku maamuli doonto muddo 30 sano ah, waxaana hore tallaabadaasi mooshin uga keenay xildhibaanada baarlamaanka federaalka Soomaaliya.
Madaxweyne Farmaajo ayaa sidoo kale la filayaa inuu ka hadlo mowqifka ay dowladda federaalka Soomaaliya ka qaadatay khilaafka ka dhaxeeyay dalalka Khaliijka iyo Qadar, taas oo ay haatan si weyn ugu kala aragti duwan yihiin siyaasiyiinta sida, xildhibaanada baarlamaanka, madaxda maamul goboleedyada dalka.
Siyaasiyiintaasi qaarkood ayaa ku doodaya in aanan lagala tashan laguna fududaaday go’aanka ay dowladda Soomaaliya ka qaadatay khilaafka siyaasadeed ee ka dhex taagan dalalka Khaliijka iyo Qadar.
Kullankaan ayaa markii uu soo gaba-gaboobo la filayaa inay kasoo baxaan natiijo wax ku ool ah.